ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: 2008
The way of S'pore joke
Not only do you have to pay, you Pay Until Bankrupt (PUB). If that's
not enough, somebody still Purposely Wants to Dig (PWD) and get more from you.
When you fall sick and happen to be admitted toaMoney Operating
Hospital (MOH). You might be able to use your Cash Prior to Funeral (CPF) fund.
Lastly, under all these pressures, there are not many places we can relax.
Not even the good old place we used to go because it has be come
So Expensive and Nothing To See Actually (SENTOSA) !!
Posted by WHITEROSE at 12:59 AM0comments
အများသုံးအိမ်သာတစ်ခုထဲဝင်ပြီး ကမုတ်ထဲထိုင်ရုံရှိသေးတယ် ဟိုဘက်အိမ်သာထဲက လူက လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။ ဤနေရာမျိုးမှာ အလာပသလာပ စကားပြောရတာ စိတ်မသက်မသာရှိလှသည်။
ဒါပေမယ့်လေ မကောင်းတတ်တော့ နေကောင်းပါတယ်ဟုသာ ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ.... ကိုယ့်ကိစ္စကို ဆက်ရှင်းမည် ကြံကာရှိသေး ထပ်မေးလာပြန်သည်။
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလိုဂွကျကျမေးခွန်းမျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်ဖြေမလဲ။ ခင်ဗျားလိုပဲပေါ့ဗျာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီး ထွက်သွားဖို့ စိတ်ကူးလိုက်သည်။
ဒါပေမယ့် နောက်မေးခွန်းတစ်ခု ထပ်ထွက်လာပြန်သည်။
ဘာတွေမေးနေတာလဲဟ.....စိတ်ထဲအံ့သြစိတ်ညစ်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် အလိုက်သင့်ပဲပြန်ပြောမိသည်။
မလုပ်နဲ့လေဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ အလုပ်ရှူပ်နေတာ။
ဟိုဘက်ကပြန်ပြောသည်။ နောက်မှပဲပြန်ဆက်တော့မယ် ဟိုဖက်အခန်းထဲက ငပြောင်က ရူးသလိုပေါသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှ ပြန်လိုက်ဖြေနေလို့ဟေ့။
Don't use mobile inside toilet!
Posted by WHITEROSE at 11:51 PM0comments